September 2014 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Anonymous at 7:55:00 PM 0
Anonymous at 11:10:00 AM 0
Khant Phyo Win at 2:35:00 AM 0
CWM Chinese စာတွေကို English ဘာသာပြန် ကြည့်ပြီး Service သမားများအတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
Khant Phyo Win at 1:51:00 AM 1
ဖုန်းService သမားများအတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Tool တစ်ခုဆိုလဲ မမှားပါဘူး။
UNI Android Tools ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Khant Phyo Win at 12:55:00 AM 0
ဒီ bat ဖိုင်ကို ရေးသားပေးထားတာတော့ ကို နိုင်လင်း ပါ။
Credit : ko naing lynn
လုပ်ရတာလဲ မခက်ပါဘူး ... Phone ကို Debugging mode on ပြီး PC နဲ့ connect
Khant Phyo Win at 12:34:00 AM 0
Khant Phyo Win at 12:29:00 AM 0
Service သမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ Andriod နှင့်ပတ်သက်၍ သင်ဒါတွေ သိပီလား
Khant Phyo Win at 8:34:00 PM 0
Android ကိုစတင်လေ့လာဖို့ကျိုးစားနေသူတွေအနေနဲ့ အများပြောနေကြတဲ့
Bootloader , Firmware, ADB , Stock ROMs, Custom ROMs, OS Kernel,
ClockworkMod, Flashing , Rooting , Baseband စသဖြင့် စာလုံး အထူး
အဆန်းတွေခြည်းတွေ့ရလို့ လေ့လာချင်စိတ်ကုန် သွားတတ်သလို့၊ တစ်လုံး စီနဲ့
သူတို့ရဲ့ သီးသန့် အလုပ်လုပ်ပုံကို အတိအကျ မသိရင် နာမည်သာခေါ်နေပေမယ့်
အနှစ်သာရ မဲ့နေတတ်ပါတယ်၊ တကယ်လေ့လာလိုသူတွေအနေနဲ့ လဲ တစ်ခုစီရဲ့
အဓီပါယ်နဲ့ အသုံးဝင်ပုံ အသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို သေချာ သိကိုသိထား
ရပါမယ်၊ ဒီပို့စ်မှာ အထက်က စာလုံးတွေအကြောင်း ရှင်းသွားပေးပါမယ်၊
တကယ်ပညာရှင်အဆင့် တက်လှမ်းချင်သူတွေအတွက် Open Source ဖြစ်တဲ့ Android က
မည်သူမဆို ဒေါင်းယူနိုင်ပီး ကြိုက်သလို ဖြတ်နိုင် ပြင်နိုင် ပါတယ်၊
စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင် မိမိနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ System
တစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ အထိ ပြုပြင်ယူလို့ရပါတယ်၊
Khant Phyo Win at 1:43:00 PM 0
Khant Phyo Win at 1:40:00 PM 0
Android Tool Huawei Lock/Unlock
Khant Phyo Win at 1:26:00 PM 0
Khant Phyo Win at 9:00:00 AM 0
Khant Phyo Win at 11:10:00 AM 0
Khant Phyo Win at 11:00:00 AM 0
Anonymous at 1:13:00 PM 0
Anonymous at 8:41:00 PM 0
အခု နောက်ပိုင်းလာတဲ့ Huawei Y511-T00 တချို့အလုံးတွေမှာ အရင်က flashtool firmware တွေနဲ့တင်လိုက်ရင် တက်လာတော့ Display လစ်သလို အဖြူကြီးဘဲပေါ်လာပါတယ် ကျနော်တော့လက်တွေ့ ၂ လုံးကြုံ လိုက်ရပါတယ် ဒီဖြင့် Y511-T00 flashtool firmware တွေ downပြီးတင်တာလည်း အဆင်မပြေဘူး ဒါနဲ့ကျနော် ဖုန်းအကောင်းတလုံးထဲကနေပြီးတော့ firmware ကို MtkDroidTools နဲ့ backup ယူပြီးတော့ firmware တင်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ် backup ယူထားတဲ့ firmware ကိုစစခြင်းတင်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးဗျ ဒါနဲ့အရင် flashtool firmware ထဲက PRELOADER ရယ် MBR ,EBR1, userdata.img ရယ် ထည့်ရေးလိုက်တော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်………….
ကျနော်ပြောတာ အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါ …….ကျနော်သိသလောက်နဲ့ ကျနော့်လို error နဲ့ကြုံတဲ့ ညီကိုများအတွက်အဆင်ပြေအောင်ပါ …….
ဒီလိုerror နဲ့ကြုံရင် firmware အဆင်ပြေအောင် ကျနော် backup ထုတ်ထားတဲ့ firmware လေးကို upload တင်ပေးထားပါတယ် …..
credit - စူပါ ကိုကျော်
Khant Phyo Win at 5:57:00 PM 0
Khant Phyo Win at 11:07:00 AM 0